I-Flaxlanden (imizuzu eyi-7 ukusuka kwi-mulhouse) Chez Seb et Lilou
Indlu encinci sinombuki zindwendwe onguSeb
(Kunokwenzeka isidlo sakusasa xa uceliwe)
Ndihlala kanye ecaleni kwegîte endivumela ukuba ndimamele kwaye ndimamele :)
Uhlaza kakhulu lusondele kakhulu kwindalo Ndandifuna ukudala indawo yokuphumla kunye nokuvuselela uhlaza kunye nezilwanyana.
I-chalet ifumaneka kwidolophana ekhangayo ejikelezwe ngamasimi kunye namahlathi, imizuzu eyi-7 ukusuka kumbindi we-Mulhouse kufuphi neColmar, iziko lokubonisa, eSwitzerland, eJamani, eBâle-Mulhouse.
Iyure enye ukusuka e-Europapark :)
Molo Igama lam ndinguSebastien kunye nentombi yam uLilou, ndiyavuya ukunamkela kwisihlomelo sam ngasechibini.
Izolile kwaye isondele kuye wonke umntu, iFlaxlanden yilali encinci apho ubomi bulungile.
Akukho ziganeko zinyamezelwayo kwipropathi, indawo yokuhlala ilungiselelwe ukuphumla nokuphumla.
Ndiya kwenza nantoni na ukuze ukhululeke, ukwenza ukuhlala kwakho kube kumnandi.
I-chalet inokuthatha ukuya kuthi ga kubantu abane, udibaniso oluninzi lunokwenzeka kuxhomekeke kwinani labahambi.
Igumbi lokulala eliphezulu linokuhlala abantu abadala abathathu kwiibhedi ezintathu ezahlukeneyo okanye ibhedi enkulu kunye nebhedi enye.
Kwigumbi lokuhlala, ibhedi yesofa ekhululekile kakhulu inokusetyenziselwa abantu ababini.
Uya kuba nokufikelela kuyo yonke ipropathi, igumbi lokuhlambela, ikhitshi elixhotyisiweyo kunye ne-intanethi kunye ne-wi-fi kwindawo yokulala kunye nakwidama lokuqubha.
Kukho indawo yokubhaka inyama kunye nefenitshala yegadi ukuze ukwazi ukutya ngaphandle kwaye uphumle, uya kuba nokufikelela kwizibonelelo zangaphandle zococeko kwigumbi lokuqubha.
Igadi enkulu yokuphumla kwi-hammock okanye i-deckchair kunye nemithi yeziqhamo ukufihla elangeni.
Uhlaza oluninzi ukuze abantwana bakho badlale kwindawo eluhlaza.
Iinkukhu kunye nemivundla yokuzonwabisa kwabancinci nabadala.
Kwabathanda ibhayisekile, indawo yam yokuhlala yimizuzu nje emihlanu ukusuka kwindlela yebhayisikile, ibekwe kakuhle kwezi ndlela zintathu:
Ungazigcina iibhayisekile zakho ngokukhuselekileyo kwaye uzitshixe ngobusuku.
Ejikelezwe ngamasimi kunye namahlathi, kunokwenzeka ukuba uhambe ngeebhayisikili zeentaba okanye ukunyuka.
Ngokhuseleko kunye nempilo yakho:
-I-alam entywilayo ekhala ngokuwa ngakunye echibini.
- Iiwotshi ezintathu ezifunekayo kubantwana ezikhala xa zidibene namanzi edama lokuqubha.
Ukhuseleko lwabantwana yeyona nto iphambili kum.
Abantwana abakufutshane nequla lokuqubha bafuna uhlale uphaphile kwaye ubabek' esweni, nokuba bayakwazi ukuqubha.Ubukho bomzali okanye umntu omdala bubalulekile.
Indawo yokupaka yabucala enesango elizenzekelayo elifumaneka simahla kwizithuthi zakho.
Molweni 😋 Igama lam ndingu Sebastien kunye nentombi yam uLilou, ndiyavuya ukunamkela kwisihlomelo sam ngase pool.
Ndiza kwenza yonke into ukuze ukhululeke, ukuze ube nokuhlala kamnandi.
Uya kuba nokufikelela kuyo yonke ipropathi, igumbi lokuhlambela, ikhitshi elifakelweyo kunye ne-intanethi kunye ne-wi-fi kwindawo yokulala kunye nakwidama lokuqubha.
Kukho indawo yokubhaka inyama kunye nefenitshala yegadi ukuze utyele ngaphandle kwaye ube nento yokuphumla kuyo, uya kuba nokufikelela kwizibonelelo zangaphandle zococeko kwigumbi lokuqubha.
Zininzi eziluhlaza ukuze abantwana bakho bakwazi ukudlala kwindawo eluhlaza.
Iinkukhu kunye nemivundla yokuzonwabisa kwabantu abadala kunye nabantwana.
Kubathandi bebhayisikile, indawo yam yokuhlala iphantse ibe yimizuzu emihlanu ukusuka kwindlela yebhayisikile, ibekwe kakuhle kwezi ndlela zintathu:
Ungagcina iibhayisekile zakho ngokukhuselekileyo kwaye utshixelwe ebusuku.
Ujikelezwe ngamasimi kunye namahlathi, kunokwenzeka ukuba uhambe ngebhayisikili yeentaba okanye ukuhamba.
-I-alam entywilayo ekhala rhoqo xa uwela echibini.
- Iiwotshi ezintathu ezinyanzelekileyo zabantwana abakhala xa bedibana namanzi edama.
Ukhuseleko lomntwana yeyona nto iphambili kum.
Abantwana abakufutshane nedama lokuqubha bafuna ukusoloko bephaphile kwaye bejongwe ngokubonakalayo, nokuba bayakwazi ukuqubha. Ubukho bomzali okanye umntu omdala bubalulekile
\_u00A0Ibhedi enkulu eyi-1, ibhedi elala umntu omnye eyi-1, isofa ekwayibhedi eyi-1, \_u00A0Ibhedi yosana eyi-1
Ilali ezolileyo kakhulu, kufutshane nesixeko saseMulhouse.
Imizuzu emi-5 ukusuka kumbindi wesixeko Mulhouse kunye neziko mboniso, Ideal kubathandi zobugcisa nenkcubeko (amaziko olondolozo lwembali, cinema, imiboniso), oko esondele kubo bonke eziluncedo (yokubhaka, ekhemesti, ugqirha ...) kunye neendlela zokufikelela (uloliwe, indlela yemoto).
Iipaki ezininzi kunye ne-zoo ziya kwamkela abathandi bendalo.
Ungahamba ngendlela yewayini ehamba ecaleni kweAlsace kwaye ungcamle ezona wayini zibalaseleyo.
Unokutyelela ezona dolophana zintle, eRiquewihr, eTurckheim, e-Eguisheim, eRibeauvillé, eKaysersberg naseColmar.
Kubathandi beemoto ingqokelela enkulu yeemoto zabazalwana baseSchlumpf.
Ngaphantsi kweyure ukusuka kwipaki yomxholo we-Europa-Park kunye nepaki yayo enkulu yamanzi yaseRulantica.
Uya kuyixabisa le chalet eqaqambileyo, uwedwa okanye nosapho lwakho :)
Ilali ezolileyo kakhulu, kodwa ikufutshane nesixeko saseMulhouse.
5 imizuzu ukusuka edolophini Mulhouse kunye neziko umboniso, ilungele abathandi yobugcisa nenkcubeko (iimyuziyam, bhanyabhanya, imiboniso), ikufutshane zonke eziluncedo (indawo yokubhaka, ekhemesti, ugqirha ...) kunye neendlela zokufikelela (uloliwe, uhola wendlela).
Ungahamba ngendlela yewayini ecaleni kweAlsace kwaye ungcamle ezona wayini zibalaseleyo.
Ungandwendwela ezona dolophana zintle, eRiquewihr, eTurckheim, e-Eguisheim, eRibeauvillé, kaysesberg naseColmar.
Kubathandi beemoto, ingqokelela yemoto yabazalwana be-schlumpf enkulu kunye neemyuziyam ezintsha.
Ngaphantsi kweyure ukusuka kwipaki yokuzonwabisa yase-Europa-Park kunye nepaki yayo enkulu yamanzi yaserulantica.
Uya kuyixabisa le chalet eqaqambileyo, uwedwa okanye nosapho :)
Umbuki zindwendwe ngu- Seb
Ndikhona ukuba uyandidinga xa kukho ingxaki, Uya kuba nenombolo yam yefowuni ukuba kukho into oyiphosayo okanye ukuba unesicelo esithile okanye ufuna nje isiselo :-)
Idiphozithi Yokhuseleko - ukuba wenza umonakalo kwikhaya, usenokubhataliswa ukuya kutsho kwi-$452
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Flaxlanden